एउटा बाख्राले गर्‍यो यस्तो चमत्कार स्थानियको होस उड्यो – live 60media
एउटा बाख्राले गर्‍यो यस्तो चमत्कार स्थानियको होस उड्यो
आज सम्म तपाईँले एक बाख्राले कतिसम्म पाठा–पाठी जन्माएको देख्नु वा सुन्नु भएको छ सामान्यतयाः एक, दुई, तीनसम्म हामीले देखेका वा सुनेका छौँ ।तर एक बाख्राले ५ वटा पाठा जन्मायो भन्दा तपाँईलाईँ विश्वास लाग्छ ? हो यो सत्य घटना हो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा यस्तो कुरा बाहिर आएको छ ।
यहाँ गुर्भाकोट नगरपालिका–९ भालुखोलामा एक बाख्राले ५ वटा पाठा जन्माएको हो । गुर्भाकोट नगरपालिका–९ मा युवराज वलीको घरको बाख्रीले ५ वटा पाठा जन्माएको हो ।
स्थानीय युवा समाजसेवी वीरेन्द्र वलीका अनुसार उक्त बाख्राले यो भन्दा अगाडीसम्म दुई वटा मात्र पाठा दिने गर्थ्यो तर यसपटक भने ५ वटा पाठा जन्मायो । यो नगरपालिकामा हाल सम्मकै नौलो कुरा हो
बाख्रा उन्नतजातको रहेको पनि वलीले जानकारी दिए । त्यसैगरी ११ प्रतिशत मानिसहरुमा बाइपोलार डिसअर्डर हुने र ६ प्रतिशत डिप्रेशन र एक्लोपनाको शिकार हुने पनि पत्ता लगाइएको हो ।
यस्ता मानिसहरुमा अनिद्राको समस्या बढी भेटिने हुनाले नै उनीहरु राति सक्रिय हुने गर्छन् । त्यसकारण यिनीहरु मध्य रातमा मोबाइल चलाउने, चिया पकाउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको प्रमुख अध्ययनकर्ता ड्यानिअल स्मिथले बताएका हुन् ।
काठमाडौँ: काभ्रेको धुलिखेलमा ३८ सय वर्ष पुरानो किराँत देवीको प्रतिमा फेला परेको छ । धुलिखेल नगरपालिका ३ स्थित अरनिको राजमार्गको जमिनको सतहभन्दा करिब तीन सय मिटर तल मूर्ति फेला परेको हो। पुरातत्वविदहरूले किराँत देवीको मुर्ति फेला पारेपछि मूर्ति नेपालको एक सबैभन्दा प्राचीन प्रतिमा रहेको बताएका छन्।
उनीहरुले उक्त प्रतिमा ३८ सय वर्ष पुरानो रहेको जनाएका छन्। मुर्ति शुक्रबार एक निर्माण कार्यको क्रममा फेला परेको हो। देवीको प्राचिन प्रतिमा फेला परेपछि हेर्न आउने स्थानीयको भिड लागेको थियो। पुरातत्वविदहरुका अनुसार उक्त मूर्ति पहिलो वा दोस्रो ईसाइ पुर्व कालको हुनु पर्ने बताएका छन्। मुर्तिमा गरगहनाको राम्रोसँग शिल्प गरिएको छ भने प्रतिमाको दाँया हात नभएको तस्बिरमा देख्न सकिन्छ।
← कुन सपनाको फल के हुन्छ ? यस्ता संकेत देखे तपाईंले जिबनमा यस्तो हुनेछ, हेर्नुस सबै सपनाको फलहरु, के देखे राम्रो ? के देखे नराम्रो
धु’लिखेल का”ठ”माडौँ विद्युतीय बस सञ्चालन →